Orinasa - Hebei Faye Co., Ltd.
Zaza ambony seza
Latabatra fanovana zazakely
Baskety Mosesy zazakely
Latabatra ankizy sy seza
Manompo anjely kely, ny fiarovana dia TSIA matetika ho antsika.
Hebei Faye Co., Ltd dia mpamatsy matihanina manokana momba ny trano any an-trano indrindra fa ny fanaka zaza / ankizy sy ny fanaka ivelan'ny trano, ny asa tanana an-trano sns sns Amin'ny fanandramana saika 10000 mahery, dia efa nandefa ny vokatrao izahay hatramin'ny 30countries manarona kontinenta 5 (miasa amin'ny kaontinanta farany 2 koa!). Ny mpanjifanay dia misy mpivarotra, mpivarotra, tranombarotra an-tserasera (Amazon, Ebay), mpivarotra koa marika eran-tany. Manompo anjely kely, takatsika tsara ny maha-zava-dehibe ny vokatra tsy azo antoka, noho izany ny fiarovana hatrany NO.1 ho antsika.
Amin'ny fanatanterahana izany andraikitra izany, dia fantatry ny fitsipika mifandraika isika ary ny ASTM, EN, AS / NZS ... fenitra fiarovana ary mifototra amin'izany, manana ekipa QC hentitra isika taorian'ny famokarana mialoha / tapitra / farany mba hanome antoka feno ny vokatra farany. izay tian'ny mpanjifanay.
Tongasoa ny mpanjifa hiresaka bebe kokoa :)
Miaraka amin'ny traikefa saika 10 tapitrisa eo amin'ity sehatra ity, dia zatra isika amin'ny fitsipika mifandraika ary ny fenitra fiarovana ASTM, EN, AS / NZS, noho izany dia mahafeno fepetra sy fiarovana ny vokatra azontsika. Ny tanjona hanolotra vidiny mora dia tsy ho tanjontsika velively. Fa kosa, miasa amin'ny vokatra mendrika sy azo antoka aloha isika vao miasa amin'ny vidiny ambany kokoa. Koa satria sarotra ny mihazona entana iray foana ny mpivarotra tsara indrindra, dia manao fanavaozana isika ary hiara-hiasa amin'ireo mpanaingo isan-taona mba hitondra vokatra vaovao isan-taona .Tokana amin'ireo fanavaozana ireo dia ampidininay amin'ny firenena 20 mahery ny vokatra entintsika any amin'ny faritra sasany. , anisan'izany ireo mpivarotra Amazon, marika Online, Wholesalers, Retailers sns.
Ho fanomezam-boninahitra ny miara-miasa aminao raha avela. Fanampin'izay, dia dia mahafinaritra ny fiainantsika
Serivisy 7x24x365 + ekipa QC za-draharaha, ny kalitao hatrany no tampony izay akaikin'ny fiarovana! Miahiahy ny vidiny ny rehetra ary tsy maintsy milaza izahay fa mety tsy ny lafo indrindra fa ny antonony, ary omena ohatra maimaimpoana ho an'ny fisavana ataonao. Faly koa manolotra entana voatondro ho anao ambanin'ny marika manokana. Ny fanampiana kely dia mitondra fiverenana betsaka, manantena ny hifanohana mandritra ny fotoana maharitra!
Makà vokatra farany na pricelist
Coronavirus (COVID-19) ary mikarakara anao ...
Torohevitra Coronavirus (COVID-19) mandritra ny fitondrana vohoka